भ्रष्ट्चारी गुण्डा दादागिरी बस्ने देश हो हाम्रो नेपाल - MONGOL KHABAR
जो सक्षम नागरिक छन्, त्यसलाई जिउन्न नदिनी देश हो हाम्रो नेपाल । जसले भ्रष्टाचारी विरुद्ध बोल्छ उसैले पिडा खेप्नु पर्ने देश हो हाम्रो नेपाल ! जसले दुख र पिडामा गुज्रेकोलाइ सहयोग गरि खुसिको दियो बाल्ने प्रयास गर्छ उसैलाई हिरासतमा राख्ने अनि पिडा दिने देश हो हाम्रो नेपाल ।
जसले दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुखि र गरिबको आशु पुछ्नी सक्षम हुनाहार नागरिकलाइ बन्देज लगाउन खोज्ने देश हो हाम्रो नेपाल ! जो देश देखि प्रदेश सम्म ठगिएको दाजुभाइ दिदिबहिनिहरुको उद्दार गर्दै आउनि माहा नायकलाइ हिरासतमा राख्ने आदेश दिनी देश हो हाम्रो नेपाल !
जो हावाहुरीले तहस नहस पारेको ठाँउमा गई जोखिम पूर्ण गासबास कपासको ब्यबस्था गर्नी महानायकलाई हिरासतमा राख्ने देश हो हाम्रो नेपाल ! रंगशाला जस्तो नेपाल कै नमुना बन्दै गरेको कार्यलाई ठप्प बन्दा गराउने देश हो हाम्रो नेपाल !
जो देश को लागि बोल्छ उसैलाई बन्देज लगाईन्छ यो भ्रस्टचारी मात्र बस्ने देश हो नेपाल पहिले देखि गर्दै आएका हुन् अझै१०० वर्ष गर्नी छन् । त्यसैले देश जनताको होइन नेताको मात्र हो यो बिषयमा हामी जनता सचेत हुन जरुरत छ । किन कि पुलिस प्रशासनले जनताको लागि कहिले गर्दैनन् माथिको आदेश अनुसार जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गर्छन ।
काण्ड चितवनको थियो, मलाई गर्ब लाग्छ नेपाली हुनमा, तर यस्तै अनैतिक कृत व्यबहारले गर्दा नेपाली हुनुमा कता कतै दुख लाग्छ ! मलाइ लाग्छ दोषीले सजाय भोग्नु पर्छ निर्दोष फसिनु भएन ! ( जय रबि लामिछाने )